११ मंसिर २०७७, बिहीबार २२:३७ - Nepal News Site
११ मंसिर २०७७, बिहीबार २२:३७
सल्लेरी : सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बिक्रम शाहीले विभिन्न कार्यालयको निरीक्षण गर्नुभएको छ । सेवाग्राहीको चाप रहने जिल्ला मालपोत, नापी, शिक्षा समन्वय, आयुर्वेद र सिञ्चाई सब डिभिजन कार्यालयको निरीक्षण गर्नुभएको हो । सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरको अबलोकन गर्दै प्रजिअ शाहीले सेवाग्राहीको ग...
काठमाडौं : बिहीबार शेयर बजारले एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ । साताको पाँचौ दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुबैले अहिलेसम्मको अधिकतम सीमामा नयाँ रेकर्ड कायम बनाएका छन् । बिहीबार नेप्सले यस अघिको उच्चतम विन्दु १ हजार ८ सय ८१ को विन्दुलाई क्रस गरी १ हजार ८ सय ९३ दशमलव २४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । ...
काठमाडौं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सांस्कृतिक र धार्मिक केन्द्रहरु जोगाउने दायित्व सबैको भएको बताउनुभएको छ । मावन सभ्यताको विकासको प्रतिकका रुपमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपालमा रहेका मठमन्दिर, गुम्बा र चैत्यहरु नेपालक...
काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ६ सय १४ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। योसंगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २ लाख २७ हजार ६ सय ४० पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर १ हजार ४ सय ३७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ९ हजार ४ सय ३५ पुगेको छ । आ...
काठमाडौं:प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दलाल पूँजीवाद र नवउदारवादी पूँजीवादलाई प्रसय दिएको भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औैं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही समूहले सरकारले दलाल पूँजीवाद र नवउदारवादी पूँजीवादलाई प्रस...
काठमाडौँ : स्थानीय प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएपछि महोत्तरीको तनाव क्रमशः सामान्य हुँदैछ । बर्दिबासमा छ वर्षीया बालिकाको अपहरणपछि हत्या र सोविरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागी घाइते भएका एकको मृत्यु घटनाले थप आन्दोलित भएको महोत्तरीमा सम्बद्ध पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएपछि अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै ...
एजेन्सी: फुटबलका हस्ती डिएगो म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अर्जेन्टेनी मध्यपंक्तिका आक्रामक खेलाडी म्याराडोनालाई विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा लिइन्छ । हृदयघातका कारण उनको मृत्यु भएको हो । अघिल्लो महिनामात्र उनको मस्तिष्कमा जमेको रगत शल्यक्रिया गरेर हटाइएको थियो । दुव्र्यवसनीका कारण उनी पटक–पट...
एजेन्सी : रुसले जापान सागरस्थित आफ्नो जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेको अमेरिकी जलसेनाको जहाज ध्वस्त पारिदिने चेतावनी दिएको छ । रुसले आफ्नो जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेको यूसएसएस जोन एस मक्केन जहाजलाई ध्वस्त पारिदिने चेतावनी दिएको हो । रुसका अनुसार युद्धपोतले अमेरिकाको एक विध्वंसक जहाजलाई लखेटेका छन् । तर अमेरिकी जलसेनाले रुसी आरो...
काठमाडौं : सरकारले आज र भोलि देशभरका ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल, जुकाको औषधि र बालभिटा खुवाउँदैछ । गत आर्थिक वर्षको दोश्रो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन कार्यक्रम बैशाखबाट असारमा सरेकाले कात्तिकमा गर्ने गरिएको कार्यक्रम मंसिरमा सारिएको सरकारले बताएको छ । पहिलो चरणको राष्ट्रिय भिटाम...
सोलुखुम्बु : जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका २ काँगेलमा जन्मनुभएका डा. योगेन्द्र कार्की कृषि सचिवमा नियुक्त हुनुभएको छ । बुधबार सम्पन्न बैठकले कार्कीलाई मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका अध्यक्ष समेत रहनुभएका डा. कार्की यस अघि सोही मन्त्रालयमा बरिष्ठ सहसचिव पदमा कार्य...